अक्सिजनका लागि सहयोग जुट्दै- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
आकस्मिक कक्षको भुइँमै संक्रमित
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा उपचार सेवा लिन नपाएका दर्जनौं बिरामी छटपटिँदै
वैशाख २३, २०७८ अमृता अनमोल, माधव ढुंगाना
बुटवल, भैरहवा — सिकिस्त बिरामी भएपछि कहाँ जाने ? यसको एउटै जवाफ हुन्छ– अस्पताल । तर, अहिले अस्पताल पुगेका धेरै कोरोना संक्रमितले उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन् । अस्पताल परिसरमा उपचार सेवा लिन नपाएका बिरामीको बिचल्ली र आफन्तको छटपटी देखिन्छ । मंगलबार र बुधबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा यस्तै दृश्य देखियो ।
बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा बुधबार उपचाररत कोरोना संक्रमित । तस्बिर : अमृता अनमोल/कान्तिपुर
कोरोना संक्रमित बाबुको उपचारमा आएका पश्चिम नवलपरासीको सरावल–७ का नरेन्द्र केवटले अस्पताल आएर पनि उपचार नपाउँदाको पीडा अह्य भएको बताए । ‘पापा बोल्नै नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । हामी टुलुटुलु मुख हेर्दै छौं,’ उनले भने, ‘अस्पतालकै आँगनमा बसेर पनि उपचार गराउन सकेका छैनौं ।’ नरेन्द्रका बाबु ६० वर्षीय रामप्रसादलाई ६ दिनदेखि लगातार ज्वरो आएको थियो । चार दिनअघि परीक्षण गर्दा कोरोना देखियो ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना कुरेर बसेका पश्चिम नवलपरासीको सरावलका सिकिस्त बिरामी । तस्बिर : अमृता अनमोल/कान्तिपुर
अचेत हुने गरी ज्वरो आउने, काप्ने र श्वास फेर्न गाह्रो हुने भएपछि आफन्तले सोमबार परासीस्थित पृथ्वीचन्द्र अस्पताल पुर्‍याए । तर, बेड नभएको भन्दै अस्पतालले गेटबाटै फर्काइदियो । सिकिस्त बिरामीलाई मंगलबार बिहानै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइयो । तर, यहाँ पनि भर्ना पाएनन् । आकस्मिक कक्षमा छिर्नसमेत साँझसम्म पालो कुरेका थिए ।
यस्तै, रूपन्देहीको तिलोत्तमा–३ का विष्णु भट्टराई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा भगवान् पुकार्दै थिए । आकस्मिक कक्षबाहिर उनका ५२ वर्षीय बाबु कोरोना संक्रमित भएपछि मृत्युसँग लड्दै थिए । ‘आईसीयूमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई इमर्जेन्सीमा छिराउन पनि सकिएन,’ उनले भने । एक साताअघि उनमा संक्रमण देखिएको थियो । घरमै आइसोलेसनमा बसेका बेला दुई दिनअघि सिकिस्त बने । नगरका स्वास्थ्यकर्मीले आईसीयूसहितको अक्सिजन कक्षमा लैजान सुझाव दिए । ‘सुरुमा भैरहवाको भीम अस्पताल, मेडिकल कलेज हुँदै मणिग्रामको क्रिमसन अस्पतालमा लग्यौं,’ छोरा विष्णुले भने, ‘कतै सेवा नपाएपछि यहाँ ल्याएका हौं । यहाँ पनि त्यस्तै भयो ।’
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा उपचारका लागि एम्बुलेन्समै पालो कुरेका बिरामी । तस्बिर : अमृता अनमोल/कान्तिपुर
मंगलबार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा उपचार सेवा लिन नपाएका दर्जनौं बिरामी छटपटिइरहेका थिए । कोही आकस्मिक कक्षमा छिर्न पालो कुर्दै थिए । कोही भर्ना पाउन हारगुहार गर्दै थिए । अस्पतालमा ठाउँ नै नपाएपछि बुटवल कालिकानगरका गजेन्द्र केसरीले सिकिस्त बिरामी पत्नीलाई घर फर्काए । ‘श्वास फेर्न गाह्रो छ । तर, सबै अस्पतालमा फोन गरें । कतै ठाउँ पाइनँ,’ उनले भने, ‘जे हुन्छ घरमै हुन्छ भनेर फर्काउन लागें ।’
बेड नपाएपछि भीम अस्पताल भैरहवामा भुईंमै उपचार गराइरहेका कोरोना संक्रमित बिरामी । तस्बिर : माधव ढुंगाना/कान्तिपुर
आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका बिरामीले थप उपचार नपाउँदाको छटपटी अझ दर्दनाक थियो । त्यसमध्येकी हुन्, कञ्चन गाउँपालिका–४ की २७ वर्षीया महिला । उनी आकस्मिक कक्षको रेड जोनमा अन्तिम अवस्थामा थिइन् । बाँच्ने आशा मारेका आफन्त उनको जीउ सुमसुमाउँदै थिए । तीन दिनअघि अस्पताल ल्याइएकी उनी बोल्न सक्दिनथिन् । अक्सिजनले मात्रै सुधार नभएपछि चिकित्सकले आईसीयू सेवाले मात्रै बचाउन सक्ने बताएका थिए । पति शमशेर विकले पोखराको चरक अस्पतालमा आईसीयू एक बेडको जोहो गरे । तर, लैजान हेलिकप्टर भाडामा नपाएको बताए । ‘गम्भीर अवस्था छ । एम्बुलेन्सबाट पुर्‍याउन सकिंदैन रे,’ उनले भने, ‘न यहाँ आईसीयू पाइन्छ, न लैजान हेलिकप्टर ।’
अस्पतालमा सात बेडको फिभर क्लिनिकसहित ३० बेडको आकस्मिक कक्ष छ । तर, मंगलबार आकस्मिकमा ४७ सहित ५३ जना कोरोना संक्रमित थिए । बेड नपुगेपछि भुइँमा सुताएर पनि संक्रमितको उपचार हुँदै थियो । अस्पतालको आकस्मिक सेवाका निमित्त प्रमुख डा. इन्द्रबहादुर राईले भुइँसमेत भरिएकाले अस्पताल आएका सबै बिरामीलाई उपचार गर्न नसकिएको बताए । आकस्मिक कक्षमा सबैजसो सिकिस्त खालका बिरामी थिए । स्वास्थ्यकर्मीहरू धेरैजसोलाई अक्सिजन दिएर जोखिम घटाउने कोसिस गरिरहेका थिए । आईसीयूमा राख्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीको भने बिजोग थियो । उनीहरूसँग मृत्युसित युद्ध गर्नुबाहेक विकल्प थिएन ।
आकस्मिक कक्षको रेडजोनमा कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाका ४० वर्षीय पुरुषको धिमा गतिमा अक्सिजन चल्दै थियो । थप उपचार नहुने भएपछि घर लैजाने कि अस्पतालमै राख्ने भन्नेमा आफन्तहरू अलमलमा थिए । आफन्त कृष्ण भट्टराईले उपचार अभावमा ज्यान जाने अवस्था आएको बताए । ‘४ दिनदेखि इमर्जेन्सीमा राखेका छौं । बीसको उन्नाइस भएन,’ उनले भने, ‘अस्पतालले आईसीयू बेड नभए बचाउन सकिँदैन भनिसकेको छ । तर, कतै आईसीयू भेटिएन ।’
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले धागो कारखानामा सञ्चालन गरेको कोरोना विशेष अस्पतालमा ३६ बेडको एचडीयू छ । १६ बेडको आईसीयू छ । तर, अस्पतालका सबै बेड भरिएका छन् । यसले आकस्मिक कक्षमा राखिएका बिरामीलाई थप उपचार सेवा दिन नसकेको अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा. नन्दु पाठकले बताए । ‘गम्भीर भएपछि मात्रै अस्पताल आएका बिरामी धेरै छन्,’ उनले भने, ‘भर्ना भएका बिरामीलाई लामो समय राख्नुपर्दा बेड खाली नभएका हुन् ।’
भैरहवाको सिद्धार्थनगर–९ का वडाध्यक्ष शेषकान्त भण्डारीलाई बुधबार श्वासप्रश्वासमा समस्या आयो । तत्काल भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा लगियो । उक्त कोरोना विशेष अस्पताल पहिल्यै संक्रमितले भरिभराउ थियो । त्यसपछि भुइँमै राखेर अक्सिजन दिन सुरु गरियो । केही समयपछि बेड व्यवस्थापन गरेर सारियो ।
बेड उपलब्ध नभएसम्म अस्पताल परिसरमा भुइँमै अक्सिजनसहित उपचार गर्नुपर्ने बाध्यतामा परेका वडाध्यक्ष भण्डारीमात्र एक्ला होइनन् । केही दिनयता भीम अस्पतालमा बेड नपाएर अस्पताल परिसरको भुइँमै छटपटाउँदै उपचार गराइरहेका कोभिड संक्रमित बिरामी जताततै देखिन्छन् । ‘सकेसम्म बिरामीलाई बेड वा स्ट्रेचर भए पनि खोजेर व्यवस्थापन गर्छौं,’ अस्पतालका सूचना अधिकारी तथा चिकित्सक नारायण पोखरेलले भने, ‘अर्को बेड खाली नभएसम्मका लागि भुइँमै पालो कुरेर बस्नुको विकल्प छैन ।’
अस्पतालमा थेग्नै नसकिने र क्षमताभन्दा धेरै संक्रमित बिरामी उपचारका लागि आउन थालेको उनले बताए । अर्को बेड खाली हुनु भनेको कुनै बिरामी डिस्चार्ज हुनु वा कसैको मृत्यु हुनु हो । संक्रमित बढ्दै जाँदा मृत्युदर पनि बढ्न थालेको छ । कतिपय बिरामीको अस्पतालको बेड चहार्दाचहार्दै ज्यान जाने गरेको छ । भीम अस्पताललाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष कोभिड अस्पतालका रूपमा स्थापना गरेको थियो । अस्पतालका अनुसार कोभिड बिरामीको उपचारका लागि उपलब्ध गराइएका २७ बेड सबै बिरामीले भरिएका छन् । आकस्मिक कक्षमा उपलब्ध रहेका ६ बेड पनि भरिएपछि आवश्यक चिकित्सकीय जनशक्ति अभावमा अस्पतालको ओपीडी सेवा पनि एक सातादेखि बन्द गरिएको छ । कोभिडका बिरामीले भरिएपछि अस्पतालको आकस्मिक कक्षको भुइँमा अहिले पनि सात जना संक्रमितलाई राखेर उपचार भइरहेको छ ।
अस्पतालमा ४१ जना कोभिड संक्रमित उपचाररत छन् । ‘उपचारका लागि छटपटाउँदै बिरामी अस्पताल परिसरमा आएपछि मानवीय नाताले बेड नभए पनि भुइँमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अस्पतालकी इमर्जेन्सी शाखाकी प्रमुख सविता शर्माले भनिन्, ‘संक्रमित बिरामी बढ्दै जान थालेकाले अब भुइँमा पनि व्यवस्थापन गर्न समस्या होलाजस्तो छ ।’
दरबन्दीअनुरूप चिकित्सक उपलब्ध गराउन भने केन्द्र र प्रदेश दुवै सरकारले चासो दिएका छैनन् । अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द ज्ञवालीले कोरोनाका बिरामीलाई उपचार गर्न विशेषज्ञ सहितको कम्तीमा २ जना फिजिसियन चिकित्सक आवश्यक पर्नेमा हाल एकजना पनि नभएपछि समस्या परेको बताए ।
प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ ०९:११